I-SocialBee: Inkundla Yezokuxhumana YamaBhizinisi Amancane Enezinsizakalo Ze-Concierge | Martech Zone
Eminyakeni edlule, ngisebenzise futhi ngahlanganisa inqwaba yezinkundla zokuxhumana zamakhasimende. Ngisenobudlelwano obuhle nabaningi futhi nisaqhubeka nokungibona ngithuthukisa izinkundla ezintsha nezikhona. Lokho kungase kudide abafundi… bezibuza ukuthi kungani ngingamane ngincome futhi ngiphushe inkundla eyodwa yawo wonke umuntu. Angazi ngoba zonke izidingo zenkampani ngayinye ziyehluka kwenye.
Kunenqwaba yezinkundla zokuxhumana ezingasiza amabhizinisi... kodwa izinhloso zakho, isu, izethameli, ukuncintisana, izinqubo, ithalente, ibhajethi, umugqa wesikhathi, ezinye izinkundla kusitaki sakho… konke kudlala indima enkulu kubathengisi ongathola ngayo imbuyiselo ngokutshalwa kwezimali kubo. Yingakho igoli likumugqa wethegi we Martech Zone ucwaningo, ukufunda, kanye nokuvundulula. Angikwazi ukukala izixazululo ze-oda ngize ngiqonde ibhizinisi lakho. Ilungelo isixazululo ngoba ibhizinisi lakho lingase libe okuphambene nalokho engingakuncoma kwelinye.
I-SocialBee: Yama-Solopreneurs, Amabhizinisi Amancane, nama-Ejensi Awasebenzelayo
OkomphakathiBee iyinkundla yokuphatha inkundla yezokuxhumana egxile ekudaleni okuqukethwe kanye nokwabelana ngeziteshi zokuxhumana. Le nkampani ihlukile ngoba inkundla iza nokuqeqeshwa kanye nezinsizakalo zokuzithandela zokusiza abantu ababodwa, amabhizinisi amancane, nama-ejensi ababasizayo. Awutholi nje kuphela inkundla, kodwa ungakwazi ukwengeza ochwepheshe abazinikele ngokugcwele ukuze bakusize ngokudala okuqukethwe, izikhangiso, ukukhula komphakathi, nokuningi.
Ukubuka konke kwe-SocialBee Platform
Ukwabelana ngokuqukethwe kugxila ngaphakathi OkomphakathiBee ihluke ngempela, izici zifaka:
Izigaba Zokuqukethwe Kwemidiya Yezokuxhumana - izigaba zikusiza ukuthi uhlele okuthunyelwe ukuze uthole imiksi engcono yokuqukethwe futhi ikunikeze ukulawula okungcono kokushejula, ukwenza ngendlela oyifisayo inethiwekhi ngayinye, ukukhiqiza okuhlukile, ukuhlela inqwaba, kanye nokubeka kabusha umugqa. Ungakwazi nokumisa isikhashana noma uqalise izigaba ezithile.
Ukushicilelwa Kwezindaba Zomphakathi - klama futhi uhlole kuqala okuthunyelwe kwakho kwenkundla yezokuxhumana ngama-hashtag alondoloziwe ngephrofayili noma inkundla. Inkundla iphinde isekele ama-emojis ukuze agqame. Ungangenisa okuthunyelwe nge CSV, RSS, I-Quuu, noma Pocket.
Ukuhlanganiswa Kwemidiya Yezenhlalo - shicilela kumaphrofayili akho e-Facebook, amakhasi, kanye namaqembu. Shicilela ku-Twitter. Shicilela kumaphrofayela akho e-LinkedIn kanye namakhasi enkampani yakho. Thumela izithombe, ama-carousels, noma amavidiyo ku-Instagram. Thumela ku-Google Bhizinisi Lami.
Ukuhlelwa Kwemidiya Yezenhlalo - Buka ikhalenda lakho, thumela ngezikhathi ezithile, phelelwa yisikhathi okuthunyelwe okuceliwe ngosuku oluthile noma ngemuva kwenani lamasheya. Isheduli ngayinye ngokusekelwe kuphrofayela ngayinye.
Izaziso ze-imeyili - waziswe uma okuthunyelwe kuhluleka, uma ukungenisa sekuqediwe, noma uma umugqa wesigaba sakho ungenalutho.
Izibalo - hlanganisa ukufinyezwa kwe-URL (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) kanye nokusekelwe esigabeni Izilungiselelo ze-UTM ukulandelela ukusebenza kokuqukethwe kwakho.
Bhukha Idemo ye-SocialBee
Nasi isifinyezo sevidiyo yesikhulumi:
Izinsizakalo ze-SocialBee Concierge
Ukuthi uphethe eyakho isu lokuxhumana kwezenhlalo noma amasu amaklayenti akho, OkomphakathiBee inikezela ngamaphakheji esevisi enkundla yezokuxhumana anjalo ngenyanga, okuhlanganisa:
Ukwakhiwa Kokuqukethwe Komphakathi -Inkundla yezokuxhumana iyingxenye ebalulekile yokumaketha kwakho, ikakhulukazi uma ufuna ukunakwa futhi uqwashise. Isinyathelo sokuqala sokwakha ubukhona obuqinile ezinkundleni zokuxhumana ukwabelana ngokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu nokukhangayo njalo.
Ukukhangisa Okuqukethwe - Ukudala okuqukethwe kukwenza ukwazi ukwakha ubudlelwano futhi udale ukwethembeka nokwethembana namakhasimende akho amanje namathemba. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okwenziwe kahle kukhiqiza ithrafikhi kuwebhusayithi yakho futhi kuba isici esibalulekile enqubweni yakho yokukhiqiza okuholayo.
Ukukhula Okuhlanganyele - Ukukhuthaza ubudlelwano be-1-on-1 ukuze wakhe umphakathi ozungeze ibhizinisi lakho kuyakhokha! Umphakathi awuwona nje umthombo omuhle kakhulu wempendulo kodwa futhi uma wakhiwe ngendlela efanele, ungenza izethameli zakho zibe amakhasimende akhokhayo futhi kamuva nabameli abathembekile.
Ukuthola kanye Nokukhulisa - Imizamo yokukhangisa yenkundla yezokuxhumana ayigcini nje ngokukhulisa ukufinyelela kwakho futhi ikuvumela ukuthi wabelane ngomlayezo wakho eziteshini ezimbalwa, kodwa futhi ilingana nanoma yisiphi isabelomali futhi kulula ukuyikala. Futhi, uthola ukufinyelela kumibandela yokukhomba ethile.
Futhi, uma udinga nje usizo oluthile ekuqaliseni, i-SocialBee inikeza iphakheji yemali ephansi ukuze ithuthele konke okuqukethwe kwakho OkomphakathiBee noma ufuna ukuqala kabusha, singakusiza ngokusetha kokuqala. Kusukela ekudluliseleni konke okuqukethwe kwakho nezilungiselelo zangaphambilini ku-SocialBee, kuya ekuhlanganiseleni uhlelo lwakho, ungathembela kithi!
Funda kabanzi Ngamasevisi e-SocialBee
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye OkomphakathiBee futhi ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kule ndatshana.
Tags: kancaneI-BL.INKUkukhangisa Okuqukethweizinsiza zokumaketha okuqukethwecsv ezinkundleni zokuxhumanaFacebookIqembu le-FacebookUkushicilela kweqembu le-FacebookIkhasi le-facebookUkushicilelwa kwekhasi le-FacebookIphrofayela ye-Facebookgoogle ibhizinisi lamigoogle ibhizinisi lami lokushicilelainstagramukushicilela kwe-instagramI-JotURLikhasi lenkampani ye-linkedinukushicilela ikhasi lenkampani ye-linkedinI-PixelMeephaketheniquuuRebrandlyXhuma kabushaI-RocketLinkRSSIbhizinisi elincanei-ejensi yamabhizinisi amancaneukukhangisa kwezokuxhumanaukwakhiwa kokuqukethwe kwenkundla yezokuxhumanaukukhula kwezokuxhumanaukuhlanganiswa kwabezindaba kwezenhlaloukushicilela ezinkundleni zokuxhumanaukuhlela ezokuxhumamasevisi enkundla yezokuxhumanaisu lokuxhumana kwezenhlaloukuqeqeshwa kwezokuxhumanainyosi yomphakathiTwitteri-url shortener
I-Zyro: Yakha Kalula Isizinda Sakho Noma Isitolo Se-inthanethi Ngaleli Platform Ethengekayo